Kunyanya Kuchengeta Zvigadzirwa
Anopemberera 21st Anniversary
ne admin pane 09-07-21
Chikunguru 20th, 2021 ndeyegumi nemakumi maviri emakore Anthem. Isu tinofara kuti tanga tichifamba takananga kuchikamu chitsva nekushinga uye kushanda nesimba. Mushure memakore makumi maviri nerimwe ekunaya uye kupenya, isu takakohwa michero yakafuma. Isu takazvipira kuvaka rakapararira renyika mhando mune yakakwira-kumanikidza radiography syri ...
Antmed Anopa Miriyoni Imwe kuHenan Njodzi Yemafashama Resonctruction Basa
ne admin pane 09-01-21
Kubva 2021 Chikunguru 17 kusvika 21st, Dunhu reHenan rakawana kunaya kwakanyanya munhoroondo. Iyi ndiyo mvura yakanyanya kunaya kubvira 1961. Yakaitika mumaguta ese mudunhu reHenan uye mvura inonaya zvakanyanya kumatunhu ekuchamhembe nepakati. Iyo yakanyanya marevhuru emvura muZhengzhou ndeye 461 ....
Anthem iri kuwedzera simba rekubaya Covid-19
ne admin pane 05-11-21
Kubva muna Kubvumbi 28, 2021, mapurovhinzi makumi matatu nematatu (nzvimbo dzakazvimiririra nematunhu enharaunda akananga pasi peCentral Government) uye Xinjiang Production uye Construction Corps vakazivisa kuti huwandu hwakawanda hwe24,3905,000 doses yeCOVID-19 jekiseni rave kupihwa. Pindura ...
Yakavhenekerwa 1ml / 3ml / 5ml Luer-Lock COVID-19 Majekiseni Ekudzivirira
ne admin pane 05-10-21
Iwe une here chinodikanwa chinokurumidzira che COVID-19 majekiseni ekudzivirira? Kana iwe unofanirwa kuunganidza yakawanda yakawanda yeyako nyika / dunhu? Yakagadziriswa, iyo inotungamira yakakwira yekumanikidza sirinji brand muChina, iri kuendesa kutenderera pasirese mhando yepamusoro uye yakavimbika 1ml / 3ml / 5ml Luer-Lock tip ...
Antmed neMedica Trade Fair
ne admin pane 03-23-21
Medica Trade Fair inzvimbo inozivikanwa pasi rese uye nhamba yekutanga yekuratidzira yekurapa. Inozivikanwa sechipatara chikuru pasirese uye zvekurapa zvigadzirwa zvekuratidzira nezviyero zvisingadzoreki uye simba. Ndiyo vane yeindasitiri yekurapa. Gore rega rega, vanopfuura 3 600 ...
Yakadzika Yakafa Space 1mL Luer-yekuvhara Vaccine Syringe Sumo
ne admin pane 03-18-21
Muna 2020, nekuda kwekupararira kwechirwere chitsva checoronavirus, hupenyu hwevanhu hwakajairwa zvakanyanya. Vanenge vanhu vanosvika mabhiriyoni manomwe pasi rose vanoda kubaiwa jekiseni rekudzivirira hutachiona hutsva. Musika wese wekudzivirira zvino wave kushomeka. Vanhu vazhinji havakwanise kuwana iyo itsva covid ...
Yakagadziriswa 1ML / 3ML Yakadzika Yakafa Nzvimbo Luer-yekukiya Syringe Misa Kugadzira
ne admin pane 03-15-21
Shenzhen Antmed Co, Ltd. inoshanda pakutsvagisa nekusimudzira, kugadzira, kutengesa uye kusevenza kwehunyanzvi hwekurapa zvigadzirwa. Isu tiri mutungamiri wemusika wepamba mune yakakwira-yekumanikidza sirinji uye inoraswa inomanikidza transducers indasitiri zvikamu. Isu tinopa imwechete-yekumira mhinduro ye ...
Chigadzirwa Chigadzirwa Chigadzirwa Outlook Y2021- Y2025
ne admin pane 02-26-21
Indasitiri yechiChinese yezvigadzirwa zvekurapa yagara iri chikamu chinomhanya-mhanya uye yave kutariswa semusika wechipiri mukurusa wehutano pasi rose. Chikonzero chekukura nekukurumidza ndechekuti iyo inowedzera mari yekushandisa mune zvekurapa, mishonga, chipatara nehutano-inishuwarenzi. Kunze ...
Musiyano uripo pakati peyeraki-rakakiiwa sirinji uye luze-slip sirinji
ne admin pane 02-20-21
Luer-lock sirinji inoshandiswa zvakanyanya munyika dzekumadokero. Munyika zhinji dzichiri kusimukira, luer-slip syringe inonyanya kufarirwa nekuda kwemutengo wayo wakaderera. Iyo luer slip dhizaini inotaridzika yakapusa - unogona kungoivharira mukati. Asi izvi hazvisi zvekurerutsa, asi rakakomba dambudziko rekiriniki rine chekuita nekuti ...
Midziyo yekurwiswa Covid-19 1ml / 3ml Syringe yekudzivirira
ne admin pane 01-28-21
Hot tag: 1ml sirinji, 3ml jekiseni, jekiseni rinoraswa, gadziriro yekudzivirira, kutumirwa kwenyika dzese, Canada yekudzivirira, tsono uye majekiseni, mirayiro yedenda ANTMED, seChinese inotungamira yakakwira yekumanikidza sirinji inogadzira, tinonzwisisa mutoro watinotakura seumwe wevapi vekiyi ini ...
Kusiyanisa Media Injector Musika 2021 Forecast
ne admin pane 01-21-21
Musiyano weMedia Injector Musika 2021 Forecast Musika wepasi rose wekusiyanisa midhiya simba injekita yakagadzirirwa kuwedzera kubva pamadhora mazana mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nemazana mashanu muna2016 kusvika pamadhora mazana maviri emadhora mugore ra2024, sekutsvagurana nekambani yekuongorora McKesson. Izvi zvinomiririra chikamu chegore rekukura mwero (CAGR) ye12 muzana. Iyo ...
2020 Chinese Vhoriyamu-based Procurement Policy Kuongorora
2020 Chinese Vhoriyamu-yakavakirwa Kutenga Sisitimu Yekuongorora Hurumende yeChinese yakaburitsa vhoriyamu-yakavakirwa yepamusoro-kumagumo ekurapa chishandiso uye chirongwa chekutenga zvinodhaka gore rapfuura uye ichiwedzera gore rino. Uku kuyedza kunowedzera simba remutengo wekutaurirana wehurumende kubva kune vanogadzira zvinodhaka uye zvekurapa, kubatsira r ...